China ukukhanya kwelanga odongeni ukucaciswa kwabakhiqizi beLumens abayi-1000 nabaphakeli | I-Hangchi
≥80 Lux, kuvaliwe
≤20 Lux, ivuliwe
I-M1: 0 + PIR 1000LM (amasekhondi ayi-10） M2: 20LM + PIR 1000LM (10seconds)
I-Aluminium + PC
Imodi yokukhanyisa: M1: 0 + PIR 1000LM (amasekhondi ayi-10）
I-M2: 20LM + PIR 1000LM (10seconds)
2.Cindezela inkinobho ebomvu engu-1.5S ukuvula nokuvala futhi ngemuva kokuyivula kuzovulwa futhi kuvulwe ngokuzenzakalela, hlola ngezansi kwesithombe ； Cindezela inkinobho ebomvu ukuze ushintshe izindlela
3. kulula ukufaka
I-ALS (uhlelo lokukhanyisa oluguqukayo): Lapho kuhlangana nokushoda kwesimo sezulu esibi kwelanga elanele, uhlelo luzokwenza ukubala okufika ngesikhathi okulingene komthamo webhethri osele futhi lunikeze ukusetshenziswa okuphezulu kokusebenza kahle kokukhanyisa isikhathi eside
I-TCS (uhlelo lokulawula ukushisa) lapho izinga lokushisa lingaphezu kuka-60 ℃, i-TCS izonquma uhlelo lokushaja ukuvikela ibhethri, lapho lingaphansi kuka-60 ℃, uhlelo lokushaja luzoqhubeka lusebenze ngokuzenzakalela
Idizayini yesimanje neyesigaba siyatholakala kunoma yisiphi isigaba. Umzimba omncane onomzimba omkhulu, okuhle kakhulu ukuthengiswa e-Amazon.
1. Yenziwe ngomzimba we-aluminium, ihluke ngokuphelele ilambu elishibhile emakethe. Iningi lazo lenziwe ngezinto zepulasitiki ze-ABS ezinomzimba oqinile
2. Kulula ukufaka nokuthumela - umzimba omncane onamandla amakhulu (i-1000 lumen) ngokusebenza okuhle.
3. Ubuchwepheshe bethu obuyingqayizivele bokuqinisekisa ukuthi ukukhanya kusebenza kahle ezinsukwini ezinemvula / ezinamafu (izinsuku ezi-5 ngaphezulu).
Izimo zohlelo lokusebenza:
Ingafakwa ezinhlangothini zombili zemigwaqo emincane njengamapaki nemiphakathi ukuhlinzeka ukukhanyisa kwabahamba ngezinyawo abadlulayo;
Izingxenye zamathrafikhi namachweba kusetshenziswa njengezibani zokukhombisa ukuqinisekisa ukuphepha nokuhleleka kwethrafikhi nokuzulazula;
Sebenzisa njengokukhanya kokuhlobisa ezindaweni eziphithizelayo zasedolobheni noma ezikhangayo ukuze wakhe umoya othile;
Ingasetshenziswa ezingadini zezithelo, emasimini, otshanini nakwezinye izindawo ukuthola ukukhanya nemiphumela yokubulala izinambuzane.
Ukubukeka kulula futhi kuhle, kunomsebenzi wokulawulwa kokukhanya okulawulwa isikhathi, ukulawula okuhlakaniphile kokuqina kokukhanya;
Usebenzisa izinga lokuguqulwa eliphakeme lamapaneli elanga namabhethri angagcwaliseka, ukukhanya kwelanga okuqinile kungashaja isikhathi eside;
Lapho inzwa ikhanya, ukukhanya kokukhanya kuphakeme;
Ukushaja ilanga, ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo;
Asikho isidingo sezintambo, ukufaka noma yikuphi, ugesi onamandla amancane uphephe ngokuphelele;
Uhlelo lokungeniswa oluhlakaniphile, cisha amalambu ngokuzenzakalela emini nokushaja, bese uvula izibani ngokuzenzakalela;
Nikeza ukukhanyisa okuphezulu futhi ushintshe izindlela zokukhanya okuphansi ngokuya ngebanga labahamba ngezinyawo, kucatshangelwa izidingo zokukhanyisa nokuhlobisa;
Ngamamodi wokusebenza amaningi wokusetha, okhiye bokusebenza bahlukanisa imisebenzi ehlukene, elula necacile;
Ubuchwepheshe bekhanda lenzwa obumbili buqinisekisa ukuthi ayikho i-angle efile ekuzweleni okungu-180-degree futhi kuthuthukisa umphumela wokusetshenziswa uqobo;
Khulisa ngokwengeziwe umphumela wezibani ezimibalabala, ezikhazimulayo nezinemibala, futhi zithuthukise ulwazi lomsebenzisi;
Nikeza izesekeli zokufaka isikulufa, ezingalungiswa ezindongeni zangaphandle, uthango, izinsika nezinye izindawo;
Faka endaweni enelanga ukuqinisekisa ukukhanya okuhle kwemvelo;
Langaphambilini Ukucaciswa kwama-10000 Lumens
Olandelayo: Ukucaciswa kwama-2000 Lumens
Umjikelezo ojulile wejel ibhetri yokugcina ilanga
I-JFY ECM / ECH (isikwele) 15KW Ukusebenza okuphezulu kwe-Intell ...
Ukucaciswa kwama-10000 Lumens